jiro kamiao Factory | Mpanamboatra sy mpamatsy hazavana China
Jiro kamiao LED kamiao / fijanonana / jiro famantarana
Jiro eo anoloana: ny kamio sy ny tranofiara misy sakany lehibe mihoatra ny 1600mm dia tsy maintsy ampitaina, ary ny tranofiara misy sakany ambany noho ny 1600mm dia tsy voatery. Ny haavon'ny tany dia ambany noho ny 1500, ary ny haavon'ny tany dia mihoatra ny 350 (H1 <2100 raha tsy azo antoka ny rafitry ny fiara ao anatin'ny 1500). Fotsy ny jiro. Ho fanampin'ny fiara M1, ny fiara rehetra manana halava mihoatra ny 6m dia tsy maintsy ampiarahana 2pcs, 2pcs tsy voatery.
Orinasa namboarina manokana China Truck Tail Light Tail Lamp miaraka amin'ny Cable tsy misy plug ho an'ny Actros Rear Lamp
afaka manolotra anao mora foana izahay vokatra sy vahaolana avo lenta, tahan'ny fifaninanana ary fanohanana mpivarotra tena tsara indrindra. Ny tanjonay dia ny hoe: "Tonga eto amin'ny fahasahiranana ianao ary manome anao tsiky halaina" ho an'ny mpamokatra hazavana China Truck Tail Light Tail Light miaraka amin'ny Cable without Plug for Actros MP1 Rear Lamp, Ankasitrahanay ny fanontanianao ary voninahitra ho anay ny miara-miasa amin'ny namana manerantany.
Mpanamboatra fenitra China Truck, Light, Mino izahay miaraka amin'ny serivisinay tsy miovaova izay azonao atao ny mahazo ny fampisehoana tsara indrindra sy ny vahaolana farany ambany indrindra avy aminay mandritra ny fotoana maharitra. Manolo-tena izahay hanome serivisy tsara kokoa ary hamorona lanja bebe kokoa ho an'ny mpanjifanay rehetra. Manantena isika fa afaka mamorona togethe ho avy tsaratsara kokoa
Jiro amin'ny lafiny fahazavana 24V / 12V ho an'ny kamio
Ny halavan'ny kamio dia entina hampitana ny fikasan'ny mpamily hamaky sy hitodika any amin'ireto fiara manaraka ireto, ary ho fampahatsiahivana an'ireo fiara manaraka. Izy ireo dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ny lalana ary ilaina amin'ny fiara.
Ny LED dia diode-emitting light, fitaovana enti-manamboatra semiconductor, izay afaka mamadika mivantana ny herinaratra ho jiro, izay tsy mitovy amin'ny fitsipika mamoaka fahazavana momba ny jiro mampirehitra sy jiro fluorescent izay mahazatra antsika. LED dia manana tombony amin'ny habeny kely, fanoherana ny hovitrovitra, fitsitsiana angovo ary fiainana lava.
Sinotruck HOWO Truck Parts Head Lamp WG9719720001
Misy faribolana boribory manodidina ny jiro. Azo esorina moramora amin'ny visy. Avy eo sokafy ny varavaran'ny taksi mba hahitana fa misy visy roa ao ambadiky ny jiro. Esory ny visy ary atosiho moramora ny jiro mba hanovana ny jirony any ivelany. Manoro hevitra anao ny tsy hanovanao ny jiro miaraka amin'ny 100W mahery. Mora ny manendasa ny endrika hita taratra amin'ny lovia fanaovan-jiro anao. Raha izany dia tsy hazava izany. Tsy misy fahasamihafana be eo amin'ny famirapiratana eo amin'ny takamoa 100W sy 70-100w.
Jiro amin'ny lafiny fahazavana LED 24V ho an'ny kamio tranofiara
Fepetra takiana amin'ny jiro famolavolana semi-trailer 1.Fepetra ankapobeny 1.1Ny fitaovana famantarana hazavana rehetra, ao anatin'izany ireo napetraka amin'ny sisin'ny fiara, dia apetraka miaraka amin'ny axis referansa mifanitsy amin'ny sehatry ny fiaran'ny fiara eny an-dalana. Ho an'ny taratra retro andilan-dàlana ary jiro fanamarihana lafiny, ny axis référence dia mifandraika amin'ny fiaramanidina simetrika longitudinal an'ny fiara, raha toa kosa ny axis referansa an'ny fitaovana hafa rehetra misy jiro hafa dia mitovy amin'izany. 1.2 Ireo jiro mandamina ...
24V 12V LED Tail Light Tail Light ho an'ny kamiao Mecedes
Ny fikorontanan'ny fiara dia mety miteraka tsy fahombiazan'ny halaviran'ny fiara. Noho izany, tato anatin'ny taona vitsivitsy, tompona fiara maro no nanolo ny hazavan'ny kamiao avy amin'ny jiro nentim-paharazana tamin'ny halavan'ny LED milamina kokoa.